Dowladda oo mar kale dib u billowday waddo-xiriddii | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda oo mar kale dib u billowday waddo-xiriddii
Tan iyo wixii ka dambeeyay goortii xilka laga qaaday Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, dowladda federaalka waxay wadday qorsheyaal ay dhagaxaanta kaga qaadeyso waddooyinka magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda ayaa mar kale dib u billowday in ay xirto waddooyinka waa weyn ee magaalada Muqeisho, iyadoo saakay ay dhagxaan ku goysay Isgoyska Dabka ee magaalada Muqdisho.
Lama oga waxa sababay in la xiro Isgoyska Dabka oo aan isagu kamid noqon kuwii horay dhagxaanta loo dhigay, balse wuxuu kusoo beegmayaa maalin kaddib markii uu dhacay qarax gaari loo adeegsaday kaasoo kasoo gudbay Isgoyska Dabka kuna qarxay Isgoyska Sayidka ee waddada Makka-Al-Mukarama.
Gawaarida waa weyn ee sidda dhagaxaanta ayaa lagu arkayay waaberigii hore ee saakay iyagoo jidka dhigaya dhagxaanta, waxaana go'ay isku socodkii gaadiidka isaga kala gudbi jiray qaar kamida degmooyinka gobolka Benaadir.
Dowladda federaalka ayaa horay dhagxaan ugu jartay waddooyinka jid-caddayaasha ah ee degmooyinka gobolka Benaadir si looga hortago qatarta amni darrida, balse tan iyo markii dhagxaanta la dhigay waxba iskama baddalin falalkii amni darro ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysan jireen magaalada Muqdisho.